Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Rob Zombie wuxuu xaqiijiyay filimkiisa soo socda inuu la jaan qaadi doono 'Munsters' TV Sitcom
Rob Zombie waa waxoogaa kaar duurjoog ah. Ka soo Aqalka 1000 Corpses ilaa 31, Zombie wuxuu ahaa awood lagu xisaabtamo oo dhibic guud ah kala qeybinta taageerayaasha. Rob Zombie waa is-sheegasho Munsters xamaasad badan. Xitaa wuxuu ku amaahday codkiisa faallo dhowaan Munsters track faallooyinka blu ray. Doqonka, xitaa wuxuu leeyahay ul kulul oo caado u ah Dragula oo qaabeysan kadib Munsters gaari. Zombie hadda wuxuu xaqiijiyay warka in muddo ah la isla dhexmarayay ee ah inuu qaadan doono la qabsiga TV sitcom Munsters.
Waxay umuuqataa xaqiiqda ah in Zombie uu kusii jeedo Budapest si uu uga shaqeeyo mashruuc dabayaaqada sanadkaan ay dhab ahaantii tahay The Munsters. Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno kuwa joogtada ahMunsters fam. Laga bilaabo xaaskiisa Sheri Moon Zombie sida Lily Munster, iyo Jeff Daniel Phillips si ay suurtogal u noqoto inay la ciyaaraan Herman.
Sawirada Universal wali ma xaqiijin. Laakiin, waxaan dhab ahaan rajeyneynaa inay tani run tahay oo Zombie uusan doqon ahayn '. Waa waali in laga fekero filimka PG ama PG-13 Zombie. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa in Eli Roth uu jiiday Guriga Oo Saacad Ku Leh Waa Darbiyadiisa, markaa waxaa laga yaabaa inay suurtagal tahay.
Maxaad u maleyneysaan in ku saabsan ku lug lahaanshaha Rob Zombie a Munsters la qabsashada? Ka fikir inuu isagu yahay midka saxda ah? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Guriga Wax ayaa u imanaya inuu soo uruuriyo daabacaadda 'bulu ray' ee Warshadda Qaylada dhowaan. Akhriso inbadan oo kahor dalab koobigaaga halkan.
'House of Wax' Uruuriyaha 'Editon Blu-Ray Oo Lagu Buuxiyay Gallery-ka Argagaxa